Home Wararka Qarax Muqdisho lagula beegsaday sarkaal CXD iyo khasaare ka dhashay
Qarax Muqdisho lagula beegsaday sarkaal CXD iyo khasaare ka dhashay
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay nawaaxiga isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho kaasoo lala beegsaday gaari uu la socday sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo loo adeegsaday miino wadada dhinaceeda la dhigay uu haleelay qeybo ka mid ah gaariga sarkaalka. Gen. Maxamed Xaashi Guuleed oo ka mid ah Saraakiisha Militirga Soomaaliya oo la socday gaariga ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray qaraxaas.
Sidoo kale, qaar ka mid ah ilaaladiisa ayaa la soo sheegayaa iney ku naf waayeen qaraxaas oo dhacay wax yar ka dib markii gaariga uu la socday taliyaha uu ka soo baxay xerada Villa Baydhabo.
Previous articleDeni oo isku dayay inuu warbaahinta Puntland ka joojiyo wararka A. Karaash
Next articleWasiirka Batroolka oo Xasan Kheyre dusha ka saaray saxiixa heshiisyada gaarka ah
Hoggaamiyaha Tigray oo shaaciyey inay Duqeyn Doonaan Addis ababa, una digay...
MW Somaliland Muse Bixi oo si heer sare loogu soo dhaweeyay...